အမျိုးသမီးများအတွက် Faux Leather Zipper အခြေခံအနက်ရောင် biker ဂျာကင်အင်္ကျီများ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်လုံးဝမ ၀ ယ်ပါနှင့် WoopShop®
အမျိုးသမီးများအတွက် Faux Leather Zipper အခြေခံအနက်ရောင် biker ဂျာကင်အင်္ကျီ
$49.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $83.99
အရွယ် XL XXL XXXL S M L
အနက်ရောင် / XL / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အနက်ရောင် / XXL / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အနက်ရောင် / XXXL / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အနက်ရောင် / S / တရုတ် အနက်ရောင် / M / တရုတ် အနက်ရောင် / L / တရုတ် အနက်ရောင် / XL / တရုတ် အနက်ရောင် / XXL / တရုတ် အနက်ရောင် / XXXL / တရုတ် အနက်ရောင် / S / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အနက်ရောင် / M / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း အနက်ရောင် / L / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း
အမျိုးသမီးများအတွက် Faux Leather Zipper အခြေခံအနက်ရောင် biker ဂျာကင်အင်္ကျီ - အနက်ရောင် / XL / ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အလှဆင်: အိတ်ကပ်, ဇစ်
စတိုင်: Moto & Biker
အပြင်ပိုင်းအမျိုးအစား: သားရေ & ဆူး
ပစ္စည်း: PU, Faux သားရေ
44 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
Спасибопродавцу! Женепонравилось! Прозлапасылказа 20 днейдоМоздока! отправкабыласРоссии။
ဂျာကင်အင်္ကျီကအေးတယ်၊ အရမ်းမြန်တယ်။ ရောင်းသူသည်ပေါင်းသင်းနိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းများကိုကျွန်ုပ်အကြံပေးလိမ့်မည်။ ဝမ်းသာပါတယ်
အဆိုပါဂျာကင်အင်္ကျီအလွန်ကောင်းတဲ့ကြည့်! ကုန်ပစ္စည်းကောင်းဆွစ်ဇလန်နိုင်ငံသို့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ချိန် ၁၉ ရက် (၄ င်းအရွယ်အစား M china) သည်ဂျာကင်အင်္ကျီ ၀ တ်ထားသောမိန်းကလေးသည် ၁.၅၅ မီတာခန့်ရှိသည်
၄၄ မှာအရွယ်အစားကြီးကြီး L ကြီးတယ်၊ သေးငယ်လွန်းတယ်။ နွေးထွေးတဲ့ဆွယ်တာအင်္ကျီတစ်ထည်နဲ့ဆွယ်တာအင်္ကျီကိုလည်းဝတ်နိုင်တယ်။ ဂျာကင်အင်္ကျီကိုယ်တိုင်ကကောင်းပါတယ်၊ ဒါက Bershka နှင့် mussmarket ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းမှာ dermantin ဖြစ်သည်။ ဂျာကင်အင်္ကျီပေါ်တွင်ဒေါင်လိုက်အိတ်ကပ်များသည်ကြီးမားသည်။ ဖုန်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလိုက်ဖက်သည်။ ပြီးတော့အလျားလိုက်တစ်ခုကမကြီးဘူး၊ ခါးပတ်ကိုရောက်တယ်။ ခါးပတ်အတွက်ရှေ့ကွင်းကြီးထွားသည်နောက်ဘက်ရှိပါတယ်။ အင်္ကျီလက်တွင် 44 cm လျှော့ချအလှဆင်ဇစ်ရှိပါတယ်။ ခါးပတ်ကိုဂျာကင်အင်္ကျီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းခိုင်မာသည့်အခြေအနေမရှိပါ။ အဆိုပါဆက်စပ်ပစ္စည်းမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါ, ဇစ်အခြေချကြသည်မဟုတ်, ကော်လာအပေါ် rivets fixed နိုင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်၊ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်